ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲကို ရုပ်သံကကြည့်တဲ့သူတွေ ခပ်မိုက်မိုက်မိန်းကလေးတွေကို မြင်ရဖို့မရှိတော့ဘူး
ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲစဉ်အတွင်း ခပ်မိုက်မိုက် မိန်းမချောလေးတွေကို မြင်ကွင်းချဲ့မရိုက်ပြဖို့ တားမြစ်ခဲ့တဲ့ ဖီဖာ
13 Jul 2018 . 4:15 PM
ကမ္ဘာ့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်(ဖီဖာ)ဟာ ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲစဉ်အတွင်း ပရိသတ်ထဲက ခပ်မိုက်မိုက် မိန်းမချောလေးတွေကို ရုပ်သံမှာ မြင်ကွင်းချဲ့ရိုက်ပြတာတွေ မလုပ်ဖို့အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ရုပ်သံဌာနတွေကို တားမြစ်ချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ဖီဖာက ဘောလုံးပွဲတွေမှာ လိင်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေဖြစ်လာမှာ စိုးတဲ့အတွက် အခုလို တားမြစ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက် ခပ်မိုက်မိုက် မိန်းကလေးတွေဆို ရုပ်သံရိုက်ကူးတဲ့သူတွေက Zoom ရိုက်ပြတာကို ပရိသတ်တွေ သတိပြုမိပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုရိုက်ပြမှုကြောင့် ရုရှားအသင်းရဲ့ပရိသတ် နမ်ချင်နိုဗာ Nemchinova ဟာ ပုရိသပရိသတ်တွေအကြား နာမည်ကျော်ကြားခဲ့ပြီး လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ သူမရဲ့အမည်က ထင်ရှားလာခဲ့တယ်။
ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲစဉ်တွေကို ရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်နေသူတွေက ပရိသတ်တွေထဲမှာ Wags (ဘောလုံးသမားတွေရဲ့ ချစ်သူ၊ ဇနီးမယား)တွေ၊ ခပ်လန်းလန်း မိန်းကလေးတွေ၊ ထူးခြားတဲ့ပုံစံဝတ်ဆင်ခဲ့သူတွေကို ရိုက်ပြလေ့ရှိပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ လိင်ခွဲခြားမှုဆန့်ကျင်ရေးအဖွဲ့ Fare Network က Executive Director ဖြစ်သူ ပီရာယာပိုဝါ Piara Powar က ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကာလမှာ ရုရှားနိုင်ငံက အမျိုးသမီးတွေအပါအ၀င် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားခံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်က အကြိမ်(၃၀)ကျော်အထိရှိခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Fare Network ဟာ ဘောလုံးပွဲစဉ်တွေမှာ အမျိုးသမီးတွေ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားခံရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကို စောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့အဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပီယာရာပိုဝါက အမျိုးသမီးသတင်းထောက်တွေ သတင်းတင်ဆက်နေတုန်း အမျိုးသားပရိသတ်တွေက သူတို့ကို ပွေ့ဖက်တာ၊ အတင်းနမ်းတာ စတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေ အများကြီးရှိတယ်လို့လည်း ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဖီဖာအနေနဲ့ အမျိုးသမီးတွေ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားခံရမှု မရှိအောင် ဒီလိုတားမြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် ထိရောက်မှုရှိပ့ါမလားဆိုတာတော့ မေးခွန်းထုတ်ရမှာပါ . . .
ကမ်ဘာ့ဖလားပှဲစဉျအတှငျး ခပျမိုကျမိုကျ မိနျးမခြောလေးတှကေို မွငျကှငျးခြဲ့မရိုကျပွဖို့ တားမွဈခဲ့တဲ့ ဖီဖာ
ကမ်ဘာ့ဘောလုံးအဖှဲ့ခြုပျ(ဖီဖာ)ဟာ ကမ်ဘာ့ဖလားပှဲစဉျအတှငျး ပရိသတျထဲက ခပျမိုကျမိုကျ မိနျးမခြောလေးတှကေို ရုပျသံမှာ မွငျကှငျးခြဲ့ရိုကျပွတာတှေ မလုပျဖို့အတှကျ သကျဆိုငျရာ ရုပျသံဌာနတှကေို တားမွဈခကျြထုတျပွနျထားပါတယျ။ ဖီဖာက ဘောလုံးပှဲတှမှော လိငျခှဲခွားဆကျဆံမှုတှဖွေဈလာမှာ စိုးတဲ့အတှကျ အခုလို တားမွဈခဲ့တာလညျးဖွဈပါတယျ။ ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲတဈလြှောကျ ခပျမိုကျမိုကျ မိနျးကလေးတှဆေို ရုပျသံရိုကျကူးတဲ့သူတှကေ Zoom ရိုကျပွတာကို ပရိသတျတှေ သတိပွုမိပါလိမျ့မယျ။ ဒီလိုရိုကျပွမှုကွောငျ့ ရုရှားအသငျးရဲ့ပရိသတျ နမျခငျြနိုဗာ Nemchinova ဟာ ပုရိသပရိသတျတှအေကွား နာမညျကြျောကွားခဲ့ပွီး လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာတှပေျေါမှာ သူမရဲ့အမညျက ထငျရှားလာခဲ့တယျ။
ကမ်ဘာ့ဖလားပှဲစဉျတှကေို ရိုကျကူးထုတျလှငျ့နသေူတှကေ ပရိသတျတှထေဲမှာ Wags (ဘောလုံးသမားတှရေဲ့ ခဈြသူ၊ ဇနီးမယား)တှေ၊ ခပျလနျးလနျး မိနျးကလေးတှေ၊ ထူးခွားတဲ့ပုံစံဝတျဆငျခဲ့သူတှကေို ရိုကျပွလရှေိ့ပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ လိငျခှဲခွားမှုဆနျ့ကငျြရေးအဖှဲ့ Fare Network က Executive Director ဖွဈသူ ပီရာယာပိုဝါ Piara Powar က ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲကာလမှာ ရုရှားနိုငျငံက အမြိုးသမီးတှအေပါအဝငျ လိငျပိုငျးဆိုငျရာ စျောကားခံခဲ့ရတဲ့ဖွဈရပျက အကွိမျ(၃၀)ကြျောအထိရှိခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။ Fare Network ဟာ ဘောလုံးပှဲစဉျတှမှော အမြိုးသမီးတှေ လိငျပိုငျးဆိုငျရာစျောကားခံရတဲ့ဖွဈရပျတှကေို စောငျ့ကွညျ့လလေ့ာနတေဲ့အဖှဲ့လညျးဖွဈပါတယျ။ ပီယာရာပိုဝါက အမြိုးသမီးသတငျးထောကျတှေ သတငျးတငျဆကျနတေုနျး အမြိုးသားပရိသတျတှကေ သူတို့ကို ပှဖေ့ကျတာ၊ အတငျးနမျးတာ စတဲ့ဖွဈရပျတှေ အမြားကွီးရှိတယျလို့လညျး ဆကျလကျပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ ဖီဖာအနနေဲ့ အမြိုးသမီးတှေ လိငျပိုငျးဆိုငျရာ စျောကားခံရမှု မရှိအောငျ ဒီလိုတားမွဈခဲ့တာဖွဈပမေယျ့ ထိရောကျမှုရှိပ့ါမလားဆိုတာတော့ မေးခှနျးထုတျရမှာပါ . . .
by Ko Kyue . 16 mins ago